သောသီခို: လစ်ဗျားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကဒါဖီသေဆုံး
လစ်ဗျားနိုင်ငံမှာ ယာယီအစိုးရတပ်တွေက ခေါင်းဆောင်ဟောင်း မိုမာ ကဒါဖီကို သုတ်သင်ခဲ့တယ်လို့ ယာယီအစိုးရ ထိပ်တန်း တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
Posted by ဇင်ယော် at 11:19 PM
လေးစားအပ်ပါသော မိခင် ကေအဲန်ယူ ကရင်အမျိူးသားအစည်းရု...
KNU Statement Appealing UN and Democratic Countrie...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - 31 Oct 2011
Burma uses Chemical Weapons against Kachin rebel (...
Burmese Army resorts to chemical weapons warfare a...
စည်ပင်အဖွဲ့၏ အခွန်ကောက်ခံမှုကြောင့် ဈေးသည်များ ဒုက...
23 govt soldiers killed by KIA during fighting in ...
နေ့ စဉ်သတင်း - 28 Oct 2011
FBR REPORT: Photo Essay- Burma Army Uses Civilians...
Seven-year-old child killed,amother and other vi...
နေ့ စဉ်သတင်း - 27 Oct 2011
FTUK - ထုတ်ပြန်ချက်
မန်မော်-လွယ်ဂျေ စစ်ပွဲတွင် မြန်မာစစ်သား ၄ ဦး ကျ
အရေးမထင် မပြစ်မမြင် အာဏာရှင်များ (အပိုင်း ၂)
နေ့ စဉ်သတင်း 26 Oct 2011
မြန်မာစစ်သား ပစ်ခတ်မှုတွင် ကိုယ်ဝန် ကျောင်းဆရာမ ဒဏ်ရာရ
အစိုးရတပ်များ ဆွဲမိုင်းဖြင့် အဆက်မပြတ် တိုက်ခိုက်ခံရ
အစိုးရသတင်းစာ၏ စွပ်စွဲချက် KNU ငြင်းဆို
ဖမ်းဆီးခံရသည့် KNLA ဆေးမှူး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်
FTUB ထုတ်ပြန်ချက် (၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်)
ကြံ့ဖွတ်တပ်မတော် နဲ့ကရင်အမျိူးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - 24 Oct 2011
နေ့ စဉ်သတင်း - 24 Oct 2010
ပြည်တော်ပြန် ဟန်ယောင်ဟွေ့ ကိုယ်တိုင် ထုတ်ပြန်ချက်
ဟန်ယောင်ဟွေ့ပြည်တော်ပြန်ကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်၍ EURO-B...
ပခုက္ကူ ရေကြီးမှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးသူများအတွက် လျေ...
ရာဇ်ဝင်ထဲက "မူယယ်ဖဲ" အလှဘုရင်မလေးရဲ့အကြောင်း မသိသေ...
ကဒါဖီရဲ့နောက်ဆုံးနေ့(ရုပ်သံ)
မြန်မာအစိုးရ သစ္စာခံ ကချင်ပြည်သူ့စစ်များ ပြန်လှည့်လ...
Discrimination, Conflict and Corruption The Ethnic...
ENC Press Release
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - 21 Oct 2011
ကချင်ဒေသနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အီးမေးသို့ ရောက်လာတဲ့ ကွန်...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - 18-19 Oct 2011
တနှစ်ခွဲ ကချင် ကလေးငယ် အား မြန်မာအစိုးရတပ်မှပစ်သတ်
IDP ဌာနေမဲ့ ပြည်တွင်းဒုက္ခသည်တစ်ဦးရဲ့ ဘ၀တစေ့တစောင်း
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်က အိမ်ခြေ (၂၀) ကျော် မ...
BGF နှင့် အစိုးရတပ် ထိုင်းဘက်ခြမ်းကူးကာ ကရင်တပ်ကို...
စစ်ပွဲကြားက မြေဇာပင် မြန်မာ ကလေးငယ်များ
ကချင်အမျိုးသားများ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင် မဟာမိတ်ဘက်မှ က...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - 15 - 16 Oct 2011
Statement on the release of FTUB members and the n...
ကလိုကွယ်မြူးဇစ် အဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
ထောင် ၂၆ နှစ်ကျ ပြည်တွင်းသတင်း စုဆောင်းခဲ့သူ လွတ်ေ...
ဒီ​ကေဘီ​အေနှင့်​ အစိုး​ရတပ် တိုက်ပွဲဖြစ်
ဟတ်ကြီး ရေကာတာ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ Karen Rivers Watch အ...
Someone Must Always Be in Control
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား၍ ကျေးရွာဥက္ကဌနှင့် ရွာသားများဖမ်းဆ...
25,000 Kachin flee to KIO controlled area
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ENO မှ Asia Dire...
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ENO မှ Amnesty I...
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ENO မှ Internati...
မလေးရှား မြန်မာသံရုံးရှေ့ တွင် စုပေါင်းဆန္ဒပြနေကြသေ...
ဦး​သိန်း​စိန် အစိုး​ရ တိုင်း​ပြည်ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​...
သင်္ကန်းညီနောင်- ကော့ကရိတ်လမ်း ဖေါက်ရန် ထိုင်း- မြန်...
မြန်မာနိုင်ငံအမျိူးသားလူ့ အခွင့်အရေးကော်မရှင် တိုင...
တိုင်းရင်းသားများ မလေးရှားတွင် စုပေါင်းဆန္ဒပြ
နေပြည်တော်အတွင်းရေး -9Oct 2011
UNFC ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိူးများ ဖယ်ဒရယ်ကော...
ကရင်တကျပ် ဗမာ ခုနှစ်ကျပ်
နေပြည်တော်အတွင်းရေး -7Oct 2011
KWAT - ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (ထိုင်းနိုင်ငံ) ၏...
KIC ကရင်သတင်းစဉ် - စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၁
မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း ရပ်တန့်ထားမှု CPI ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အင...
ရွာသားများအား စစ်တပ်လမ်းပြအဖြစ် ခေါ်ယူအသုံးပြုနေ
ဘုရားသုံးဆူအနီး KNLA နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်
ကချင်ပြည်နယ် အလယ်ပိုင်း စစ်ပွဲတွင် မြန်မာစစ်သား ၄၀ ကျ
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံအရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ FTUB ထုတ်ပြန်ချက်
BURMA: Unitary system hinders reconciliation and e...
နေ့ စဉ်သတင်း -5Oct 2011
သံလွင်မြစ်ပေါ်ရှိ ရေကာတာများကိစ္စ စိတ်ဝင်စားကြရန် တိ...
ကရင်နီပြည်ရေအောက်ရောက်နေ၍ ဆယ်စီမံကိန်းရပ်စဲရန် KDR...
မြန်မာအစိုးရတပ်ကကျောင်း သားများကိုကျည်ကွယ် ပြုပြီး...